SAHA LONAKA: Hampifanerasera mivantana ny tantsaha sy ny mpanjifa | Madatopinfo
SAHA LONAKA: Hampifanerasera mivantana ny tantsaha sy ny mpanjifa
Hotanterahina ny 1 sy 2 Aprily ho avy izao ao amin’ny Sahamaitso Ombalahivato Ambohimalaza ny andiany voalohany amin’ny tsena ben’ny tantsaha “Saha lonaka” araka ny fampahafantarana natao tetsy amin’ny Karibotel Analakely omaly Alarobia 27 Martsa. Hetsika hanomezan-danja ireo mpamokatra any an-toerana sady hampiratiana sy hivarotana ny vokatry ny tany sy ny asa tanana Malagasy.
“Nosafidiana manokana ny tanàn’Ambohimalaza noho izy toeram-pitsangatsanganana indrindra fa rehefa andro fety. Tanjona ihany koa ny hamerenana ny fahatsaran’ity tanàna ity ary indrindra ny hampifanerasera mivantana tsy misy mpanelanelana ny tantsaha sy ny mpanjifa”, hoy ny tomponandraikitra voalohany ao amin’ny fikambanana I’Ray Fanahy Vonjy Razafitsifa. Ambohimalaza izay fanta-daza amin’ny fambolena sy fiompiana ka maro ny vokatra hita mandritra ireo roa andro misesy ireo toy ny sakafo Malagasy, ronono, tantely, legioma sy ireo asa vita amin’ny tanimanga sy biriky.
Hiavaka ity roa andro hankalazana ny Paska ao Ambohimalaza ity, lanonana horavahan’ireo mpanakanto efa fanta-daza maro. Handray anjara amin’izany ny Groupe Dihvin, hampiseho an-tsehatra ny tantara niandohan’ny Malagasy amin’ny alalan’ny hira sy dihy. Ho avy hanafana ny sehatra ny Alatsinain’ny Paska kosa i Randria Ernest, sady mpitendry zava-maneno no mpihira. Haneho ny talentany ao ihany koa i Vonjy Razafitsifa amin’ny fampisehoana an-tsehatra ny tantara anehoana ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana. Tsy diso anjara ny Pray’f sy I’Ray Fanahy hitondra hira fiderana. Ankoatra ny fampisehoana, hisy ny fifaninana hira sy dihy ary tantara an-dapihazo “jeune talent” ary ahazo loka ireo izay voafidy.
Nomarihin’ny mpikarakara fa tsy nasiana vidim-pidirana ity andiany voalohany amin’ny hetsika “Saha lonaka” ity hanomezana fahafaham-po ny mpitsidika avy ao an-toerana sy ny avy any ivelany.
Navin, solotenan’ireo artista handray anjara sy Vonjy Razafitsifa mpikarakara nandritra ny valan-dresaka tao amin’ny Karibotel Analakely